စစ်ရေးအဝတ်အထည်။ အမျိုးသမီးအဝတ်အစားအတွက်စစ်တပ်စတိုင်။ အမျိုးသမီးများအဝတ်အစားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ။
စစ်ရေးအဝတ်အစား - ပေါ့ပေါ့ဖက်ရှင်, ပေါ့ပေါ့နဲ့ပြိုင်ကားဆန်သော
အတန်အသင့်, ပြင်းထန်လက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်စွယ်စုံအဝတ်အစားစစ်ရေးနေ့စဉ် wear များအတွက်အလွန်ကောင်းစွာသင့်လျော်သည်။ မကြာသေးမီက, ဒီ style ကကမ္ဘာ၏ဖက်ရှင်နှင့်ငယ်ရွယ်မိန်းကလေးငယ်များသာမကအကြား, ဒါပေမယ့်လည်းအသက်ကြီးသောမိန်းမတို့အဘို့အလွန်လူကြိုက်များဖြစ်လာသည်။
ဒီစတိုင်၏အရေးအပါဆုံးအင်္ဂါရပ်စစ်တပ်ယူနီဖောင်းများအတုဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအမြိုးသမီးမြားရဲ့အဝတ်အစားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလိုင်းများသိသာညှဉ်းဆဲခြင်းကိုနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားကွဲပြားနေသည်။ ထို့အပြင်ကြောင့်အချို့သောပြတ်သားနှင့်အလှဆင်အတွက်ရိုးရှင်းသောမရှိခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤစတိုင်နှငျ့ပတျသကျသောပစ္စည်းများကို၏ဗီရို, ဘာမျှမနှင့်အတူအလှဆင်ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ များသောအားဖြင့်သူတို့ကယူနီဖောင်း၏ဂုဏ်တော်အားဖြင့်ဖြည့်ဆည်းနေကြသည်:
ထိုကဲ့သို့သောဂျလူငယ်ဦးတည်ချက်ပေးထားစတိုင်စဉ်းစားသည်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး-စစ်ရေး 1960 ခုနှစ်မှာ US မှာပေါ်ထွက်လာခြင်းနှင့်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့ကြင်နာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယနေ့အထိအကျော်ကြားဆုံးဒီဇိုင်နာများနှင့်ဖက်ရှင်အိမ်၏ collection များကိုများတွင်လက်ရှိကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်မရွေးအမျိုးသမီး, ပေါ့ပေါ့ wear စစ်တပ်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်လက်တွေ့ကျကျတင်ဆက်ဒီလမ်းကြောင်းသစ်တောင်းဆိုချက်များကို၏ထုတ်ကုန်၏အသွင်အပြင်ဖို့မယုံနိုင်စရာအဆင်ပြေစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ စစ်တပ်ပေါ့ပေါ့စတိုင်ပုံမှန်ကိုယ်စားလှယ်များအောက်ပါနေကြသည်:
ဂျာကင်အင်္ကျီ-ဗုံးခွဲသူ - တာရှည်အရာ, နှစ်ဆယ်ရာစုနှစ်ပေါင်း 50 တစ်ဂျာကင်အင်္ကျီ-ဗုံးခွဲသူလေယာဉ်မှူးဖြစ်သည့်များ၏ရှေ့ပြေးပုံစံ;
ဂျာကင်အင်္ကျီ "natovka" - ကြီးမားသောအိတ်ကပ်များနှင့်အတူ 1965 ခုနှစ်၏အမေရိကန်စစ်တပ်ယူနီဖောင်းများ Element တစ်ခုရဲ့ ရပ်-up, ကော်လာ ;
ပန်းခြံ - မူလကချမ်းနဲ့ဖောက်လေတိုက်ရာမှစစ်တပ်လေယာဉ်မှူးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည့်သားမွေးလျနှင့်အတူကိုပွငျဆငျတစ်ပါးပျဉ်းနှင့်အတူတစ်ဦး elongated ဂျာကင်အင်္ကျီ။
အမျိုးသမီး image ကို ပေါ့ပေါ့-စစ်တပ်များ၏ပုံစံကိုမကြာခဏကြိုးကို (bertsami) သို့မဟုတ်သားရေဘွတ်ဖိနပ်နှင့်အတူမြင့်မားသောစစ်ဖိနပ်များကပြည့်စုံ။ ထို့အပြင်ဤအရာများကိုဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း၏အခြားဒြပ်စင်များနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူပါတယ်, သူတို့ကနေ့တိုင်း wear များအတွက်အားကစားစတိုင်အဖြစ်အချို့သောမော်ဒယ်များနှင့်ဆက်စပ်သောကောင်းစွာသင့်လျော်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။
ပြောက်ကျားပစ္စည်းကိုဖန်ဆင်းအားကစားထုတ်ကုန်များစစ်ရေးတိမ်းညွတ်။ ဤအတောအတွင်းကအားကစားစစ်ရေးသေချာပေါက်တစ်ရှူးအစိမ်းရောင်နှင့်အညိုရိပ်၏စေရမည်ဟုမဆိုလိုပါ။ မော်ဒယ်တစ်ဦးကကျယ်ပြန့်တစ်ခုချင်းစီကိုမိန်းမသည်ဗီရိုပစ္စည်းများ azure, ခရမ်းရောင်, ငွေနှင့်အဝါရောင်အပါအဝင်ကြိုက်ခဲ့သည်မယ်လို့အဘယ်အရာကိုရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
စစ်တပ်ယူနီဖောင်းအခမ်းအနားများအတွက်နေ့စဉ် wear သို့မဟုတ်ပါဝင်မှုများအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ပေါ့ပေါ့ wear စစ်ရေးထည်သို့မဟုတ်ပြောက်ကျားပစ္စည်းရိုးရာ monophonic khaki သို့မဟုတ်နားမှာ-အစိမ်းရောင်က hue ၏ လုပ်. , ထုတ်ကုန်အခြေစိုက်စခန်းဗီရိုထဲမှာယင်း၏အခြေခံထားပါတယ်။ ဒီလမ်းကြောင်းသစ်ဘောင်းဘီပုံစံဖြောင့်သို့မဟုတ်အခမဲ့ဖြတ်အဖြစ်ကို T-ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ရှပ်အင်္ကျီအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဒီမှာပုံစံမျိုး၏အဓိကဒြပ်စင်အိတ်ကပ်, အစင်းများနှင့်ထိုးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အစဉ်အလာ 1960 အတွက်အလွန်ဘုံခဲ့သည့် hippie ၏ကျမ်းပိုဒ်နှင့်ဆက်စပ်ဒီစတိုင်လူငယ်ဦးတည်ချက်။ အခုတော့ထိုနေ့ရက်ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့, ငယ်ရွယ်ဖက်ရှင်အမျိုးသမီးတွေဝက်ရွက်တိုင်ဘောင်းဘီ, အကျီ, ချောင်ခါးပတ်နှင့်အခြားအလားတူထုတ်ကုန်ဝတ်ဆင်ရန်ကြိုက်တယ်။ စစ်တပ်စတိုင်အဝတ်အစားမိန်းကလေးများကျယ်ပြန့်အဆက်မပြတ်ပြောက်ကျားပစ္စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ် monochromatic ထည်သံလွင်အရောင်ကို လုပ်. , model အသစ်ပေါ်ထွက်လာသည့်တစ်ဦးချင်းစီအစုအဝေး၌နာမည်ကြီးဒီဇိုင်းကိုအိမ်သူအိမ်သား Ed က Hardy အသုံးပြုသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်တက်တူး၏ပုံစံအတွက်လက်မှတ်ထုတ်, သံကြိုး, လုံးနှင့်ပန်းတွေနဲ့အလှဆင်နေကြပါတယ်။
စစ်ရေးဖက်ရှင်လမ်းကြောင်းသစ်ပြင်အဝတ်အစားအပါအဝင်, နှင့်အအေးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလနေ့ရက်ကာလအဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်တဦးတည်းခြင်းမရှိဘဲမတွေးဝံ့စရာပါပဲ။ ဒါဟာလည်းပါဝင်သည် insulator တွင်လည်းအကျီ ဝိသေသဒီဇိုင်းကိုအသံထွက်နှင့်အင်္ကျီ။ လေ့ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှာအသုံးပြုတဲ့အဝတ်အစားပစ္စည်းများလူသိများ - ထိုသို့သောထုတ်ကုန်၏အခြေခံလောင်းကုတ်အင်္ကျီနှင့်အကျီဝတ်နေကြတယ်။
စစ်တပ်စတိုင်ဆောင်းရာသီအဝတ်အစားအားကြီးသော silhouette နှင့်ချွန်ထက်ပခုံးလိုင်းရှိရမည်။ ဒါဟာပခုံး pads သို့မဟုတ်အလှဆင်ကြိုးဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒီဇိုင်နာများအလားတူမော်ဒယ်များဖြည့်စွတ်, ကော်လာရပ်, သုံးဖက်မြင်အလှည့်-Down ထိုး, ကို double-ရင်သားကင်ဆာ Clasp, ခါးပတ်, သိုင်းကြိုးနဲ့ကြီးမားတဲ့ slot အိတ်ကပ်။ ထိုကဲ့သို့သောအမှုအရာအတွက် buttons, rivets နှင့်အလှဆင်ထည့်သွင်းများသောအားဖြင့်သတ္တုနဲ့လုပ်ထားတဲ့နေကြသည်။
ဒါဟာဖက်ရှင်လမ်းကြောင်းသစ်အများအပြားကျော်ကြားဒီဇိုင်နာများ၏ collection များကိုတွင်ထင်ဟပ်လျက်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်အသက်အရွယ်အမျိုးသမီးအကြားလူကြိုက်အများဆုံးကအောက်ပါအမှတ်တံဆိပ်စစ်ရေးအဝတ်ခံစားရန်:
ပိုလျှံရော်စပျစ်သီး - ဂျာမန်အမှတ်အသားထက်ပိုအနှစ် 30 ရှိပြီးအရာများ၏သမိုင်း။ ဒါဟာစပျစ်သီးနှင့်ပြောက်ကျားများ၏ဒြပ်စင်ပေါင်းစပ်ပြီးနေ့စဉ်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အမှုအရာများထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်အထူး;
alpha Industries, - နေ့စဉ် wear များအတွက်ထုတ်ကုန်များ၏ကျယ်ပြန့်ကမ်းလှမ်းတဲ့ဒဏ္ဍာရီအမှတ်တံဆိပ်။ အဝတ်အစားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ၏ကြွယ်ဝသောရွေးချယ်ရေးတိုင်းမိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကသင်၏အရသာတစ်ခုသင့်လျော်သောဂျာကင်အင်္ကျီ T-ရှပ်အင်္ကျီ, ဘောင်းဘီတို, ဘောင်းဘီနှင့်အခြားပစ္စည်းများတွေ့ပါခွင့်ပြု;
Thor Steinar - အခြားဂျာမန်ထုတ်လုပ်သူ 1998 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒီအမှတ်တံဆိပ်အောက်မှာဖြန့်ချိအဝတ်အစားစစ်ရေးအခြားအမှတ်တံဆိပ်ထူးခြားတဲ့နှင့်အလွန်အမင်းမှတ်မိစတိုင်၏ထုတ်ကုန်ထံမှအလွန်ကွဲပြားခြားနားလျက်ရှိ၏
Nord မုန်တိုင်း - အဓိကအားဖြင့်လူငယ်များအဘို့ထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်မယ့်အတော်လေးငယ်ရွယ်ပေမယ့်အလွန်ရေပန်းစားအမှတ်တံဆိပ်။ ဤအတောအတွင်းအမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်များ၏ကျယ်ပြန့်အဆင်းလှသောလိင်တစ်ဦးစီညာဘက်ရွေးချယ်မှုလုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဥယျာဉ် Ain အယ်လ် Madhab
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦး foal ၏အိပ်မက်?
"- အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းပုံလမ်းညွှန်, ဒေဗောရ Needleman မူလစာမျက်နှာ, အမွှေးအမူလစာမျက်နှာ" ၏စာအုပ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Dukan Diet - ခြေလှမ်းများ
အာလူးနဲ့ Solyanka - စာရွက်
အဆိုပါသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတူးမြောင်း၏ polyps - ကုသမှု